योग जीवनका लागि अपरिहार्य छ, यसले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्छ — Chetana Online
योग जीवनका लागि अपरिहार्य छ, यसले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्छ
पतञ्जली योग जिल्ला महिला समिति प्यूठान
कोरोना भाइरसको महामारिका कारण अहिले विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । वैज्ञानीकहरु कोरोनाको औषधी र भ्याक्सिन भत्ता लगाउत जुटिरहेका छन् तर, अहिलेसम्म सफलता मिल्न सकेको छैन ।
नेपालमा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‘ओली’ ले हाम्रा पुर्खाहरुको अध्ययनले रोगसँग लड्ने उपाय सिकाएको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले व्यायामका साथै मनतातो पानी र बेसार खाँदा शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधि क्षमतको विकास हुने बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लगत्तै कतिपयले उहाँको आलोचना समेत गरेका थिए । पूर्वीय सभ्यताबाट विकास भएको योग अभ्यसाले मान्छेलाई निरोगी रहन निकै सहयोग पुग्ने योग गुरुहरुले समेत बताएका छन् ।
उनीहरुले हाम्रै घर आँगनमा पाइने जडिवुटी तथा खानामा औषधिको गुण हुने बताईरहेका छन् । यसैसन्र्दभमा पतञ्जली योग जिल्ला समिति प्यूठानकी महिला प्रभारी सिता रिजालसँग योग र यसको फाइदाका बारेमा चेतना अनलाइनका सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
सामान्यतया योग भनेको जोड हो । योगले हरेक कुरालाई जोड्ने काम गर्छ । योग जीवनको अभिन्न अंग हो । जति हामीलाई खानाको आवश्यकता छ त्यति नै योग साधनाको आवश्यकता छ ।
अहिले कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त छ । कोरोनाबाट बच्नका लागि योगले केही फाइदा गर्छ ?
हामीले सबैभन्दा पहिले बुझ्ने कुरा के हो भने रोगले सबैभन्दा बढी कमजोर स्वास्थ्य भएका मान्छेहरुलाई भेट्छ । स्वस्थ मान्छेलाई रोगले छुन सक्दैन । यदी छोइहाल्यो भने पनि उसले सहजै पचाउन सक्छ ।
कोरोना भाइरसको औषधी अँझै बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी आँफै सचेत हुने हो । सचेत हुने भनेको हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्ने हो ।
हामीले योगका माध्यमबाट रोगप्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न सक्छौं । प्रतिरोधी क्षमताको विकास भयो भने अवष्य पनि हामीलाई जुनसुकै रोगले पनि असर गर्न सक्दैन । औषधी खाएर पनि हामीले हाम्रो रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाएर रोगलाई जित्ने हो ।
औषधी आँफैले रोगको नष्ट गर्ने होइन । औषधीले त हाम्रो शरीरको इम्यूनीटी पावर बढाएर रोगलाई भगाउने मात्र हो ।
हामीले हाम्रो रोगप्रतिरोधी क्षमता कसरी बढाउने ?
हाम्रो खानपान, जीवनशैली र वातावरणले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ । यी तीनओटा कुरामा ध्यान दिएर आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने हो भने हाम्रो रोगप्रतिरोधि क्षमता बढ्छ ।
हामीले कस्तो खाने कुरा खाने ?
हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टि आहारहरु सन्तुलित ढंगले खानुर्पछ । खाने तरिका र समयको पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
परापूर्वकालमा औषधीको विकास नहुँदा पनि मान्छेहरु स्वस्थ थिए । किनकी उनीहरुले स्वस्थ्य आहार सन्तुलित ढंगले खाने गर्दथे ।
त्यस्तै हामीले औषधीय गुण भएका खानेकुरा तथा जडिबुटीको सेवन गर्नुपर्छ । जस्तै बेसार, तुलसीका पात, निम, घिउँक्वारी, बोजो, लहरे गुर्जो, गाने गुर्जो लगायत अन्य थुप्रै औषधिका गुण भएका जडिबुटीजन्य खाने कुराहरु छन् । यस्तो बेला हामीले यी खाने कुरालाई सन्तुलन मिलाएर खानुपर्दछ ।
जीवनशैली कस्तो हुने ?
हरेक देशमा कानुन हुन्छ । देश चलाउनका लागि संविधान बनेको हुन्छ । त्यस्तै हाम्रो जीवनको पनि नियम हुन्छ ।
नियमपूर्वक जीवनशैली अपनाउन सकेको खण्डमा हामी अवष्य निरोगी हुन्छौं ।
विहान उठ्ने देखि शौच गर्ने, योग गर्ने, सकारात्मकको सोँच गर्ने, निराशावादी नहुने, अरुलाई सम्मान र माया गर्ने, समयमा खाने, सुत्ने आदी कुराको सन्तुलन मिलाउन सकेको खण्डमा हामी निरोगी हुन्छौं ।
वातावरणको कुरा गर्नुभयो नि ?
हाम्रो घर, समाज देखि समग्र देश र संसारको वातावरण कस्तो छ भन्ने कुराले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । वातावरणको प्रदूषणले अहिले निकै ठूला प्राणघातक रोगहरु पनि आएका छन् ।
यो कोरोना भाइरस पनि मान्छेले गरेको वातावरणको प्रदूषणले नै उत्पत्ति भएको हो । हामीले अब वातावरण प्रदूषण रोक्नै पर्छ ।
त्यसैगरी वातावरण शुद्धिका लागि होम गर्न जरुरी छ । होम गर्दा हाम्रो वायुमण्डलाई निकै सफा बनाउँछ । त्यस्तै हाम्रो परिवार र गाउँ समाजको वातावरण पनि स्वच्छ बनाउन जरुरी छ ।
धेरै कुरा त आयो । अब ठोस भाषामा भनिदिनुहोस् हामीले योग किन गर्ने ?
म त योग किन गर्ने भन्दा पनि योग किन नगर्ने ? भनेर सबैमा प्रश्न गर्न चाहन्छु । योग जीवन हो । यसलाई नबुझेकाहरुले धर्मसँग जोड्छने । धर्म हाम्रो आस्था हो तर, योग साधना हो । योगलाई नितान्त धर्मसँग मात्रै जोड्नु हुँदैन । तर, योगले हामीलाई अनुशासित, इमान्दार, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउँछ ।
तपाई योगमा कहिले देखि लाग्नुभयो ?
म सानै देखि व्याम गर्दथे । तर, मलाई योगको वारेमा त्यति धेरै जानकारी थिएन । हुन त टिभिमा योग र वावा रामदेवको प्रवचन सुनेको थिए । प्यूठान जिल्लामा योग साधना शुरु भएको थियो । तर, म घरकी बुहारि थिए ।
म मा धेरै जिम्मेवारी थियो । सबैसँग परिचय पनि थिएन । म घरमा एक्लै टिभि हेरेर योग गर्दथे । योगको सबै जानकारी भने थिएन । पछि भने हाम्रो गाउँमा योगको शिविर चल्यो । त्यतिवेला हामीलाई सिकाउन गुरु गणपति खनाल र ओमहरी भट्टराई आउनुभएको थियो । त्यहाँ हामी धेरै महिला सहभागी भयौं । गुरुहरुको प्रशिक्षणबाट म निकै प्रभावित भए ।
त्यसपछि म योग साधनामा निरन्तर लागे । पछि प्यूठानमा योग समिति गठन भयो । त्यसमा अध्यक्ष केदारमान कक्षपति हुनुभयो । उहाँ मेरो अभिभावक पनि हो । उहाँले मलाई योगमा अँझ क्रियाशिल हुन हौसला दिनुभयो । योगले हामीलाई भावनात्मक रुपमा अँझ नजिक बनायो । नाताले दाई सम्वोधन गरे पनि मैले उहाँलाई बुवा समानको मान्छु । उहाँ अध्यक्ष भएपछि मलाई प्रभारी हुन जाँगर लाग्यो । त्यसपछि प्युठान जिल्ला समिति अन्तर्गत महिला प्रभावरी भए ।
योगले तपाईको जीवनमा केही परिवर्तन ल्यायो त ?
मलाई परिवर्तन मात्रै होइन आमुल परिवर्तन नै ग¥यो योगले । म पहिले निकै अस्वस्थ हुन्थे । मलाई समय समयमा रिस उठ्थ्यो । टाउको निकै धेरै दुख्थ्यो । पाठे घर, पिनास, ग्याष्ट्रिकको समस्या थियो । डरको अनुभव हुन्थ्यो ।
काममा त्यति जाँगर लाग्दैन थियो । तर, अहिले म आँफूलाई निरोगी भएको अनुभव गरेको छु । मलाई काम गर्ने उत्साह आउँछ । समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भावनको विकास भएको छ ।
म गाउँ घरमा सबैसँग सामुहिक काममा अग्रसर भएर लाग्छु । सबैको समस्या सुन्ने र सक्दो सहयोग गर्ने मन लाग्छ । यी सबै योग साधनाले मेरो जीवनमा ल्याएको परिवर्तन हो ।
धेरै मान्छेहरु योग गर्ने फुर्सद नै छैन भन्छन् । तर, तपाईले समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
तपाईलाई कुनै दिन फुर्सद नभएर खाना खान रोक्नुभएको छ ? शौचालय जान रोक्नुभएको छ ? यी काम गर्न हामीलाई समय हुने तर, योग गर्न किन समय नहुने ? हामी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि किन योग नगर्ने ।
रोग लागेमा हामीलाई कति धेरै औषधी खर्च हुन्छ ? तर, हामीले निरोगी हुने उपाय किन नखोज्ने ? योगले हाम्रो आयू बढाउँछ । हामी सबै धेरै बाँच्न चाहन्छौं । धेरै बाँच्ने योग साधान गर्न अप्ठेरो मान्छौं ।
अब योग सबैले गर्नुपर्छ । गाउँगाउँमा यसको जागरण फैलाउनुपर्छ । जसले योग गर्ने फुर्सद छैन भन्छ उनीहरुलाई मुर्ख भन्छु म । योग सबैका लागि हो, सधैका लागि हो ।
म आम पाठकहरुलाई योगमा लाग्न आग्रह गर्दछु । योगको फाइदाको वारेमा बयान गर्न सम्भव नै छैन । योगले हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारीक जीवन र सामाजिक जीवनमा निकै फाइदा गर्छ । मानसिक स्वास्थ्यमा पनि फाइदा गर्ने योगमा सबै लाग्न जरुरी छ ।
असारे हिलोसंगै धानका कुरा